सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदै, के जेल जान सक्छन् ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदै, के जेल जान सक्छन् ?
काठमाडौ । सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश यो इजलासमा हुनुहुन्छ ।
यसअघि १६ भदौमा पेशीमा चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको ज्यान लिइएको घटनामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्धा लागेको छ ।
१६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा कब्जामा लिइएको थियो । साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै त्यहाँ पुरेको भन्दै उहाँकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिनुभएको थियो ।
प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा उजुरी गर्नुभयो । २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च जानुभयो र सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यो बेला अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हाल्नुभएको थियो । यो मुद्धा निक्कै महत्वकांक्षीका रुपमा हेरिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट यो मुद्धाको टुंगो लगाउनुपर्ने माग माओवादी पक्षको छ । यदि अदालतबाट नै दोषी ठहर गरे सभामुख सापकोटा जेल जानुपर्नेहुन्छ । भविष्यमा राजनीति गर्न अयोग्य ठहरिनुहुनेछ ।